Ndozi 10 Can Pụrụ Imejuputa maka Azụmaahịa Azụmaahịa Taa! | Martech Zone
Akụkụ na-eto eto nke inbound ahịa mgbalị anyị idokwa n'ihi na ụlọ ọrụ na-agụnye ma ugwo na organic mmadụ media azum. Ana m afụfụ mgbe niile na akụkọ na-aga n'ihu na mgbasa ozi mmekọrịta anaghị enweta nloghachi na ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-achọta n'ebe ọzọ. N'ikwu eziokwu niile, echere m na ọ bụ n'ihi enweghị ogbugbu na usoro dị mma, ọ bụghị ndị na-ajụ ase. Anyị na-aga n’ihu ịhụ uto na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ dịkwa ọfụma ọfụma na ị na-akwọ ụgwọ ihe anyị na-eme na mkpokọta.
Afọ Ọhụrụ na-abịa Mkpebi Afọ Ọhụrụ. Ikekwe nke gị na-aga mgbatị ahụ, ịmụ asụsụ ọhụrụ ma ọ bụ naanị izu ike karịa. Ihe ọ bụla mkpebi gị nwere ike ịbụ, enwekwara ezigbo ohere na akaụntụ mgbasa ozi gị nwere ike iji mmalite ọhụrụ na Afọ Ọhụrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji achịkọta ndepụta nke mkpebi mgbasa ozi mgbasa ozi 10 iji debe akara gị na egwu.
Ndị a bụ Atụmatụ 10 Optimization maka Social Media Marketing
Jiri Anya Ka Anya
Banye Ndị Ọrụ
Chọta Oge zuru oke gị
Nwale Iji Mgbasa Ozi
Mee vidiyo gị ka o jiri vidiyo
Jiri Hashtags Aka nri
Na-ebuli ozi maka nyiwe dị iche iche
Dee obere ihe banyere Onwe Gị
Nna-ukwu Mobile Marketing
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Tailwind.
Tags: havehtagsojiji ihe oyiyimgbasa ozi ọha na ezesoshal midia ọdịnayantinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụhashtags na-elekọta mmadụihe osise soshal midianjikarịcha mgbasa ozi mmekọrịtaọhaneze mgbasa ozimkpebi ọha na ezeusoro mgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media videona-elekọta mmadụ mobile ahịaelekọta mmadụ video